10 Inta badan Magaalooyinka Qarniyadii Beautiful In Europe | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 10 Inta badan Magaalooyinka Qarniyadii Beautiful In Europe
Europe waxaa ka buuxa taariikhda hodanka ah iyo kala duwanaanta. Dhab ahaan, ma macno ah meesha aad, laga yaabaa inaad arki doonaa hadhaagii ilbaxnimooyinka ee la soo dhaafay. Mararka qaar, goobaha kuwanu waa meelahoodii burbursanaa Anfaco. Dhanka kale, goobaha u noqon karaan meelaha in ay ka badbaaday tijaabada waqtiga iyo dhafan dunida casriga galay. Save A tareenka waxaad qaadataa on safar oo ka mid ah 10 inta badan magaalooyinka Dr Makumbe quruxda badan ee Europe. Diyaari si aad u aragto magaalooyinka qurux badan in taariikhda boorish oo nolosha casriga ah waxyaabaha in taariikhda dib ugu muddada Dr Makumbe.
1. Inta badan Beautiful Qarniyadii Town In Europe – Delft, Netherlands ayaa
Haddii aad raadinayso magaalada in koobay dareento Dr Makumbe ee wakhtigan casriga ah, eegi jirin dheeraad ah ka badan Delft. Delft wac laga yaabaa dawan in qof kasta oo jecel yahay farshaxanka tan iyo markii ay si dhow waxa uu la xidhiidhaa ah rinjiile Dutch ku qaarjisay. Dhab ahaan, haddii aad waligaa booqo magaalada, waxaad dareemi doontaa sida haddii aad ku jirtid rinjiyeynta laftiisa. Weli waxaad dareemi kartaa nuxurka rinjiyeynta, halka magaalada ku dul socda. Marka ay timaado in dhismayaasha Dr Makumbe, waxaa jira Renaissance hoolka magaalada style a oo kaniisad Dr Makumbe la munaaraddii tiirsan cajiib ah. ka Architecture-weyn Dr Makumbe reebo in aad yaabiyo doonaa, Delft ayaa sidoo kale waxa uu leeyahay xad-dhaaf ah kanaalada in ay dhex maraan magaalada oo waxaad ka samaysaa ambiance gaarka ah.
Hallstatt laga yaabaa in u muuqdaan kuwo la yaqaan in ay dadka la socda dalal dalxiis picturesque on Instagram. Waxaa jira sawiro cajiib badan oo ka yimid aagga, iyo marka aad soo booqato magaalada, waxaad ogaan doontaan sababta. Qaadashada sawir xun u baahan doontaa wax badan oo dadaal u sabab ah biyaha hortooda fantastic ah magaaladu waxay leedahay, taas oo hortiisa la yaab leh. Sidoo kale, eegno oo dhan iyo dareenka magaalada aad ka tagi doono ka Yaabid. Meesha oo dhan uu leeyahay dareenka Baroque ah in ay, waana sidaas cajiib ah in la arko in a dhaxal ahaan dunida UNESCO site. Dareemaan dareenka Dr Makumbe of Hallstatt aad soo socda safar inay Austria.
3. Inta badan Beautiful Qarniyadii Town In Europe – Echternach, Luxembourg
run ahaantiiernach waa magaalada ugu da'da weyn Luxemburg, iyo waxa uu ku yaalaa agagaarka derbiyada Echternach Abbey. Waxay hoy u tahay wax badan oo ka mid ah meelaha taariikhiga ah oo gaboobay oo cajiib ah, sida Church ee Saint Peter iyo Paul, ka Basilica ee Saint Willibrord, a Gothic magacaabay suuqa, iyo Villa a Roman in taariikhaha dib si jeer ee boqortooyadii Roomaanka. Socodka iyada oo jidadka Echternach dareemi doontaa sida aad tahay ee Musefeni. Si kastaba ha ahaatee, waxay yeelan doontaa oo dhan waan qalbiqaboojin dunida casriga ah oo aan mugdi ah oo da 'ah.
Carcassonne waa magaalo Dr Makumbe oo la ooday ka dunida inteeda kale ka. derbiga iyo munaarado dib taariikhda qarnigii 13aad iyo runtii magaalada siin fiirin iyo dareemayaa tuulada a Dr Makumbe. maalmahan, Carcassonne waa World Heritage Site UNESCO ah in aad siinaysaa dareen aad u safray ka dib markii. Tani faraxgelinta iyo sixir jawi barbaro dalxiisayaal xad-dhaaf ah oo doonaya in ay la kulmaan jawi dunida jir ah.
Narbonne in Carcassonne
Toulouse in Carcassonne
Montpellier in Carcassonne
Nimes in Carcassonne
5. Inta badan Beautiful Qarniyadii Town In Europe – Heidelberg, Germany
Heidelberg waxa uu ku yaalaa meel arrin inhabitable. Dhab ahaan, goobta ayaa waxay hoy u tahay dad muddo sanado ah. dhawaanshaha webiga Neckar iyo cimilo wanaagsan oo ka dhigtay meesha guri wanaagsan. Intii sano ee la soo, Heidelberg ayaa xarun loogu talagalay dadka. Dhab ahaan, tani waa la arki karo in ay ambiance iyo naqshadda dhismaha ee magaalada. fiican bartamaha magaalada Baroque An oo qalcaddii cajiib ah waa laba kaliya wax in aad tusto qaninimo iyo weynaanta degaanka ayaa ku faantay waqtiga oo dhan. Hieldberg ma ahaa bartilmaameed u ah inta lagu jiro dagaalkii labaad ee dunida, taas oo macnaheedu yahay in ay weli xanbaarsan wax badan oo ay taariikhda. Qaado cabbayso iyada oo loo marayo goobta this la yaab leh oo aan arko wax walba waxa ay leedahay in dalab.
Frankfurt inay Tareenadu Heidelberg
Stuttgart in Tareenadu Heidelberg
Nuremberg in Tareenadu Heidelberg
Bonn in Tareenadu Heidelberg
Marka ay timaado in magaalooyinka Dr Makumbe in Central Europe, Bern ee Switzerland waa waajib booqasho. qurxoon The, magaalada jir waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda badan ee Europe. Oo waxaa ka buuxa dukaanka in taariikhda dib u da 'dhexe iyo ilihii in muujinayaan tirooyinka farshaxan ee kala duwan. Dhab ahaan, marka ay timaado farshaxanka, Bern ayaa mid ka mid ah ururinta ugu ballaaran ee fanka ka artist ee Paul Klee. dhismayaasha ka quruxda naqshadda reebo iyo taariikhi ah magaalada, sidoo kale waxaa jira webi qurxoon socday dhex. Webiga Aar dhaco magaalada dhex mara oo ka dhigaysa in ay aad u picturesque. Mark Bern waa goob si aad u sahamiso safarkaaga soo socda ee Switzerland.
Tareenadu Zurich Si Bern
Tareenadu Geneva Si Bern
Tareenadu Interlaken Si Bern
7. Inta badan Beautiful Qarniyadii Town In Europe – San Gimignano, Italy
San Gimignano waa magaalo buuraha buugaagta ka Tuscany. Waxaa barbaro kun oo martida la fiirin Talyaani Dr Makumbe. soo jiidashada ugu weyn ee San Gimignano waa skyline ee munaaradaha breathtaking in taariikhda dib ugu qarnigii 14-ka. Marka aagga hoos xukunka Florence dhacay, oo dhan, laakiin waa afar iyo toban ka mid ah laba iyo toddobaatan munaaradaha waxaa lagu halligay. Maanta magaalada waa a site UNESCO Heritage, oo waa a waa in uu arko qof kasta in uu leeyahay xiiso in Italy taariikh hodan ah oo soo jiidasho leh.
Florence si Tareenadu San Gimignano
Arezzo in Tareenadu San Gimignano
Pisa in Tareenadu San Gimignano
Lucca in Tareenadu San Gimignano
Qaar badan oo ka tixraac used sida Venice ee Waqooyiga. Oo waxaa ka buuxa kanaalada, waddooyinka cobbled, iyo god picturesque in ku hareereysan bararka munaaradaha iyo kaniisadaha. Kuwaasi waxay yihiin qaar ka mid ah soo jiidashada in keenaan kun oo dalxiisayaal ah inay magaaladan ku soo jiidasho leh. Socodka iyada oo Bruges aad ka tagi doono ka baqeen ee isku dar ah ee dabiiciga ah iyo yaabab naqshadda. Waxaa jira yaraanta ma dhismayaasha Dr Makumbe magaalada, oo waxaad noqon kartaa hubiyo in booqasho uu ku tagay magaalada ka baxdaan aad yaabeen doonaa quruxda iyo nabad radiates degaanka.
9. Inta badan Beautiful Qarniyadii Town In Europe – Lillafured, Hungary
Lillafured waa isuga ugu fiican ee dabiiciga ah iyo naqshadaha Dr Makumbe. Waxay ku taallaa soo socda in ay Lake Hamori ee Hungary, waa waajib booqasho meel. Waxaa markii hore la dhisay miciinka u by Tirada Andras Bethlen. Si kastaba ha ahaatee, muddo, waxa ay noqotay magaalada iyo hoteel ku qurxoon. Qalcaddii la yaabka lahayd waa ku hareereysan biyo-dhaamis, boholaha dabiiciga ah, wadooyinka hortayada, iyo xataa laalaadeen Jannooyin. Sida aad u jeeddo, Lilafured waa caga kaamil ah waayo, kuwii ku caashaqi jiray dabeecadda.
Inkasta oo maraya buuraha qoraxdu iyo picturesque Tuscan diidanaa, korkiinna magaalada Dr Makumbe oo buuraha ka yimaado – Montepulciano. Waxay leedahay wax kasta oo aad rabto in aad laga yaabaa inuu ka tuulada Talyaani ah. The soo jiidashada ugu weyn waxaa ka mid ah waxyaabaha sida khamri la yaab leh, qalcaddii qadiimiga ah derbiyada, cuntada delicious, iyo xataa ilo kaamerada. Waxaa runtii waa meel soo jiidasho in aad weligaa ha sii xusuusan doonaa. Hubso in la joojiyo by haddii aad weligaa Safraan Italy.
Siena si Tareenadu Montepulciano
Grosseto in Tareenadu Montepulciano
Florence si Tareenadu Montepulciano
Rome si ay Tareenadu Montepulciano
Marka ay timaado in magaalooyinka Dr Makumbe iyo magaalooyinkeedii, Europe waa ka buuxsada iyaga,. Qaadashada markii si ay u booqdaan, kuwaas oo durdurradiisa dhaqanka iyo taariikhda taajir ka dhigi doono ra'yigaaga ku saabsan waxa ay dadku awood u. Book A tareenka on waqti iyo booqo dal ee ugu sawiri xiisaha aad.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “10 Inta badan Magaalooyinka Qarniyadii Beautiful In Europe” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbeautiful-medieval-towns-europe%2F%3Flang%3Dso – (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#beautifultowns #traveleurope Dr Makumbe medievaltown talooyin tareenka tareen safarka